99 - Private Driver and Taxi 6.8.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.8.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း 99 - Private Driver and Taxi
99 - Private Driver and Taxi ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
99 အကြီးမားဆုံးဘရာဇီးက e-မိုးသီး App ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင် mobility ပြောင်းလဲနှင့်လူရဲ့ဘဝတွေကိုအသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နှင့်အတူ, သင်ကသင်ကသီးသန့်ပရိုမိုးရှင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာ app ကိုအတွက်ငွေသားသို့မဟုတ်ဖြောင့်နှင့်အတူဖွင့်ဖြစ်စေ, ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်တက္ကစီတောင်းဆိုရန်နှင့်လည်းသင်အဘို့ပေးဆောင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်!
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး 99 စီးကိုတောင်းဆို?
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏မွို့၌လှည့်ပတ်ရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့အတှကျအများအပြား options များရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်း, အငှားယာဉ်များသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်ပိုရိတ်ဘောက်ချာအားဖြင့်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီမှငွေကောက်ခံစီးနှင့်အတူကား။ တစ်ရက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလ၌ရှိသမျှသောအခိုက်တိကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုတောငျးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု၌ရှိသောသူလည်းသင်တို့ကိုပါပဲ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်မှာသွားထားသလဲ
99 ရဲ့မိတ်ဖက်ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားပါ။ သူတို့သည်သင့်ရထိုက်သူအပေါင်းတို့ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်နှစ်သိမ့်စေရန်အတွက်လူတစ်ဦးနှင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းပေးခြင်းအပေါ်အားကိုး။ အဆိုပါကားများအဆင်ပြေများနှင့်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်တန်း၏, ကျနော်တို့ကခရီးသည် '' ratings အပေါ်တစ်ဦးအနီးကပ်မျက်စိစောင့်ရှောက်လော့။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေပါတယ်: သင်၏နောက်ဆုံးစီးနင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့မမေ့မလြော့ပါ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုမွို့၌အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်ချွေတာ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြင်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ key ကိုတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကတည်းက, ငါတို့သည်သင့်ကိုအစဉ်သင့်ကားကိုတောင်းဆိုမီပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်တစ်ခုခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူသငျသညျပေးပါလိမ့်မယ်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူသင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့စီးနင်းစဉ်အတွင်းအစစ်အမှန်အချိန်၌သင်တို့၏ POP ကိုစီးနင်းရဲ့စျေးနှုန်းကိုခြေရာခံနိုငျပါသညျ!
99 ရဲ့ကူပွန်စမတ်များမှာ! သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာတစျခုထက်ပိုရှိပါက app ကိုကိုယ်နှိုက်ကသင့်ကားမိန့်ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးလျှော့စျေးပြသထားတယ်အလိုအလျောက်ကြောင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုစာပုံးတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိ Keep သူတို့ကိုမဆိုလက်လွတ်မပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးအထူးလျှော့စျေးခံစားရန်, သင် app ထဲမှာတစ်ကဒ်သို့မဟုတ် PayPal က account တစ်ခု register ရမည်ဖြစ်သည်။
ရုံ, app ကိုဖွင့်လှစ်သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရှေးခယျြနှငျ့သငျလုပ်ပြီးသွားပြီ! 99 သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဒရိုင်ဘာကိုရှာဖွေကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနည်းပညာရှိပါတယ်, နှင့်မိနစ်ကားတစ်စီးသင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ app အတွင်း feature အသစ်ချက်တင်သုံးပြီး, စာသားသို့မဟုတ်အသံအသုံးပြုပုံဒရိုင်ဘာနှင့်အတူအခမဲ့ပြောဆိုပါ။
99 နှင့်အတူကားမောင်းတူသော Feeling? ကျွန်တော်တို့ကို join လာ. ကြည့် ယာဉ်မောင်းများအတွက် 99 app ကို Download လုပ်ပါ, ဒီမှာ register: http://m.onelink.me/85a6df7c
99 - Private Driver and Taxi အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
99 - Private Driver and Taxi အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
99 - Private Driver and Taxi အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
99 - Private Driver and Taxi အား အခ်က္ျပပါ
poupoper စတိုး0150
99 - Private Driver and Taxi ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း 99 - Private Driver and Taxi အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.8.6
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://99app.com/legal/termos/passageiros/
လက်မှတ် SHA1: 72:A5:31:79:20:51:B8:3E:87:71:64:9A:AB:9F:CE:EF:6D:F5:85:9C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): 99Táxis
အဖွဲ့အစည်း (O): 99Táxis
နယ်မြေ (L): Brazil
99 - Private Driver and Taxi APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ